နေ့များ: ပြာခြွေခွက် ၃။ ဆင်ခြေနည်းလမ်းတကျမဖော်ထုတ်နိုင်သောကိန်းများ
Posted by KZကေ at 18:45
pandora March 27, 2011 at 1:34 PM
လာ လာ ဖတ် ပါတယ်.. ဖတ်ရုံသာ တတ်နိုင်တယ်။ စာ လေးတယ်။
KZကေ March 29, 2011 at 11:52 PM
ဂိမ်းသီအိုရီအကြောင်းစာအုပ်တအုပ်ရေးဖူးရာမှာ ပရင်စတန်ဟာ ဂိမ်းကိုစခဲ့တဲ့ ကျောင်းမှန်းသိခဲ့ရတယ်။ ဂျွန်နက်ရှ် က ပရင်စတန်ထွက်။ သချာင်္သမားတွေပေါတယ်။ မစွမ်းရင်းကလည်းရှိခဲ့တော့ IHT မှာ ငါးပိုင်း ငါးရက်ဆက်ပါတဲ့ ဒီဇတ်လမ်းလေးမှာ ညိခဲ့မိတယ်။ ဒါနဲ့ ကြားဖြတ်အတင်း
၀င်ရေးဖို့ကြိုးစားမိတာ။ အားပေးတာကျေးဇူးပါ ခင်ဗျား။
T2A May 6, 2011 at 10:47 AM
"တခုတော့အံ့အားသင့်စရာပေါ့။ ဒီအယူအဆကို ကျနော်ဟာ ရူပဗေဒ၊ ဖီလော်ဆော်ဖီ ဒါမှမဟုတ် ဘာသာဗေဒ တခုခုကရခဲ့တာမဟုတ်ပဲ သချာင်္ကရခဲ့တဲ့အတွက်ပဲ။ √2 ဟာ ကိန်းပြည့်နှစ်ခုနဲ့အချိုးချဖော်ပြလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သက်သေပြချက်က
ရခဲ့တာပဲ။ ဒါဟာ သချာင်္မှာပြတဲ့ နှိုင်းယှဉ်မဖော်ပြနိုင်ခြင်းပဲ။ အကွာအဝေးတိုင်းကို ကိန်းပြည့် (သို့) အပိုင်းကိန်းတခုနဲ့ဖော်ပြလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာ။"(သိပ္ပံပညာရှုင်ဟာ ရာရှင်နယ်ကျကျတွေးခေါ်နေလို. ခုလိုအီရာရှင်နယ်ကိန်းတစ်ခုကို တွေ.လာတဲ့အခါမှာ သူတို.သိပြီးသား စံတွေနဲ.တိုင်းပြီး ပြောလို.မရနိုင်တဲ့အတွက်ပဲ “နှိုင်းယှဉ်မဖော်ပြနိုင်”တာလား။ တကယ်တမ်းမှာ ရှာဖွေတွေ.ရှိမှုအသစ်တစ်ခုအဖြစ်ကော မယူဆနိုင်ဘူးလား ။ သိပ္ပံပညာအကြောင်းပြောနေတာလား ၊ ဘာသာဗေဒအကြောင်းပြောနေတာလား ၊ အမှန်တရားအကြောင်းပြောနေတာလား ။ အမှန်တရားအကြောင်းပြောနေတာဆိုရင်တော့ ပုဂံရာဇဝင်တုတ်ထမ်းပြီးပြောသလိုဖြစ်တော့မှာပဲ ။)
T2A May 6, 2011 at 10:48 AM
ဒီအပိုင်း ၃ တစ်ခုလုံးကို ခြုံပြီးမြင်မိတဲ့ ကျွန်တော့်အမြင်ကိုပြောရရင်တော့ ….√2ကဇာတ်လိုက်ပဲ ။ သင်္ချာမှာ သဘာဝကိန်းတွေ ၊ ကိန်းပြည့်တွေအကြောင်းကိုပဲ နားလည်လက်ခံထားရာကနေ √2 ကိုလည်းတွေ.လိုက်ရော တုန်ုလှုပ်သွားကြတယ် ။ ဒီနေရာမှာ ခန်းလည်းပဲတုန်လှုပ်သွားတာပါပဲ ၊ ဒါကြောင့်ပဲ သူဥာဏ်ပွင့်ခဲ့တာမလား ။ ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ ဒါဟာ Paradigm Shift ဖြစ်သွားတာပါပဲ ။ ရာရှင်နယ်ကိန်းတွေလည်းရှိတယ် ၊ အီရာရှင်နယ်ကိန်းတွေလည်းပဲရှိနေတယ်…. ဒီနေရာမှာတော့ Incommensurable ဖြစ်တယ်လို.လက်ခံပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်း သင်္ချာမှာ ဒီလို Incommensurable ဖြစ်လို. တခြား ဘာသာဗေဒတို. ၊ အမှန်တရားတို.မှာကျတော့ ဒီလိုသွားပြောလို.မရနိုင်လောက်ဖူး ။ အားလုံးရှပ်သွားနိုင်တယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ အီရာရှင်နယ်ကိန်းကို တွေ.လာတာဟာ လူသားရဲ. သိမြင်နားလည်မှု ကျယ်ပြန်.လာခြင်းဖြစ်တယ်လို. လက်ခံနိုင်ရင် နှလုံးအေးနိုင်လိမ့်မယ်ထင်တာပဲဗျာ ။ ဟူးးးးးးးးးးးးးးးးမောလိုက်တာ ၊ Jogging ပြေး ၊ Belly up ၊ Push up လုပ်တာကနားအေးတယ်ဗျာ ။သစ္စာနီရေးခဲ့သလိုပေါ့ “စာအုပ်တွေရောင်းပြီး ဝိတ်ပြားတွေဝယ်”လိုက်တာကပိုပြီးပေါ့ပါးလိမ့်မယ် ။